Blogger Of This Week: Phani Mahat - MeroReport
Blogger Of This Week: Phani Mahat
रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर–१ का स्थायी बासिन्दा फणि महत विगत ७–८ वर्षदेखि पत्रकारिता पेशामा हुनुहुन्छ । रेडियो, टेलिभिजन र छापा तीनवटै माध्यमको अनुभव संगाल्नुभएका फणिले रिपोर्टिङ्गका अलावा ब्लग मार्फत पनि आफुले देखेका सामाजिक सवालहरुलाई बाहिर ल्याउने काम गरिरहनुभएको छ । मेरोरिपोर्टमा नियमित योगदान गर्नुहुने फणि यो साता मेरोरिपोर्टमा साताको ब्लगर हुनुहुन्छ । सँधैका साताको ब्लगरसंगजस्तै उहाँसंग पनि ब्लगिङ्ग र पत्रकारिताका सन्दर्भमा कुराकानी गरिएको छ ।
तपाईले कहिले देखि ब्लग लेख्न थाल्नुभयो ?
तराईका जिल्लाहरुमध्ये पनि हाम्रो यो रौतहट जिल्ला अरुभन्दा पिछडिएको जिल्ला भन्दा फरक पर्दैन । निकै थोरै समय मात्रै भयो यहाँ इन्टरनेटको सुविधा आएको, जवकि यो जिल्लामा फोन सेवा आएको पनि ८–१० वर्षमात्र भयो । युद्धकालमा पनि यहाँ फोनको सुविधा थिएन र हामी पत्रकारहरुले अन्य जिल्लामा गएर फयाक्सहरु गर्नु पर्ने अवस्था थियो । त्यसैले मैले यस्तो अवस्थामा पहिलेदेखि नै चाहेर पनि ब्लग लेख्न सक्ने अवस्था थिएन, भर्खरै केहि समयदेखि मात्रै सुरु गरेको हुँ ।
अनि तपाई ब्लग किन लेख्नुहुन्छ ?
ब्लग हेर्नेहरु भनेका खासगरी पत्रपत्रिका हेर्न नभ्याउने, रेडियो टेलिभिजन हेर्न वा सुन्न नभ्याउनेहरुले नै हो, जसको संख्या यहाँ पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ । यतिबेला शहरी क्षेत्रमा ब्लग लेखनले चर्चा बटुलेको छ । त्यहि भएर मैले पनि ब्लग लेख्न सुरु गरेको हुँ । साथै अर्को कुरा के भने ग्रामीण स्तरका कुराहरु पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरका नेपालीले थाहा पाउन सकुन भनेर पनि हो भने संगसंगै प्रविधि प्रतिको आकर्षणले पनि ब्लग लेख्नमा उत्सुक भएको हुँ ।
खास गरी तपाई ब्लगमा कस्ता–कस्ता कुराहरु लेख्न रुचाउनुहुन्छ ?
धेरैले भावनाका कुराहरु पनि ब्लगमा लेखेर साटासाट गरेको पाएको छु । मैले चाँही विशेष गरी सामाजिक सवालहरुलाइ समेट्ने गरेको छु । हाम्रो देशमा यस्ताखाले सामाजिक सवालहरु धेरै छन । जुन कुरा देश भित्रका नेपालीहरु, देश बाहिर रहेका नेपालीहरु र अरु महानुभावहरुलाई नेपालमा त यस्तो समस्या रहेछ भन्ने जानकारी होस् भनेर म सामाजिक समस्याहरुमा ब्लग लेख्ने गर्छु ।
नेपाली ब्लग क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मैले पछिलो समय, जहिलेदेखि ब्लग लेख्न सुरु गरे, मलाई यो एकदमै प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ । मेरो ब्लग हेरेर धेरैले दिनुभएका सुझाव तथा प्रतिकृयाहरु पनि पाएको छु । मलाई त कस्तो लाग्छ भने ब्लग सकेसम्म सबैले लेख्नुपर्छ । यसमा भावनात्मक कुरा भन्दापनि सामाजिक समस्याहरुका बारे लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यतिकै लेख्नु भन्दा समस्यालाई हेरेर, बुझेर लेख्दा यो निति निर्माण तहमा रहेकाहरुलाइ पनि निति बनाउन सहयोगी बनोस । पछिल्ला दिनमा यो प्रबृत्ति बढेर आएको छ, ब्लग बिस्तारै नेपाली समाजमा चर्चित हुँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई ।
ब्लग लेख्दाको कुनै रमाइलो अनुभव छ तपाईसँग ?
हुन त मैले ब्लग लेख्न नै भर्खर सिक्दैछु भन्दा पनि हुन्छ । सुरु सुरु ब्लग लेख्ने नै कसरी भन्ने भयो । थुप्रै साथीहरुसँग सोधेँ, साथीहरुले यसोगर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँदा सुरुसुरुमा अलि अप्ठ्यारो पनि भयो । प्रविधिको ज्ञान नहुदाँ समस्या हुन्थ्यो । अहिले त्यही कुराहरु सम्झँदा हासो उठ्छ ।
अब अलिकति फरक प्रसंग जोडौँ, तपाईले मुलधारको पत्रकारिता पनि गर्दै आउनु भएको छ । नेपालमा पत्रकारिता पेशा कत्तिको चुनौतीपुर्ण छ वा सजिलो छ ?
हाम्रो देशको पत्रकारिताको विषयमा कुरा गर्दा एकदम जोखिममा छौँ हामी नेपाली पत्रकारहरु । अझै यतिबेला मोफसलमा काम गर्नेहरुको अवस्था झनै नाजुक छ । हामी मोफसलमा पत्रकारिता गर्नेहरुले विश्वविद्यालयमा पत्रकारिता पढेर वा पत्रकारिताको शैद्धान्तिक ज्ञान लिएर रिर्पोटिङ्ग गर्ने अवसर पाएका छैनौँ र त्यो हामीकहाँ सजिलै उपलब्ध पनि छैन । सामान्य यहि समाजले सिकाएका पाठहरु र यही समाजमा काम गर्दैजाँदा सिकेका अनुभवहरुका आधारमा पत्रकारिता गर्नु परिरहेको छ, त्यसले गर्दा जोखिम पनि धेरै छन र समस्याहरु पनि धेरै छन । साथसाथै स्वयं कतिपय पत्रकारहरुले गल्ती पनि गरीरहेका छन । यसलाई सच्चाउनका लागि पत्रकार आफै सक्षम हुनपर्ने मैले देखेको छु र हामी पत्रकारहरु आफैले कस्तो पत्रकारिता गरिरहेका छौँ त भनेर आत्म–मुल्यांकन गर्न पनि आवश्यक छ ।
हामीकहाँको पत्रकारितालाई हेर्दा पत्रकारिता क्षेत्रमा टिक्न कत्तिको सजिलो छ जस्तो लाग्छ, यहाँलाई ?
मेहनत गरेर आफनो क्षमतालाई अभिवृद्धि गरेर म पत्रकारिता पेशा नै गर्छु, म यो समाजलाई यही पेशामार्फत केहि देन दिन्छु भनेर पत्रकारिता गर्ने हो भने यो पेशामा मजाले टिक्न सकिने संभावना देखेको छु मैले । तर यहाँ पत्रकारिताको नाममा कतिपय पत्रकारहरु नै समाज विरोधी काममा लागेका छन । म त सिधै के भन्छु भने रौतहट जिल्लामा मात्र यो एक बर्षको समयमा भुमिगत संगठनसंगको साईनोका कारण ४ जना पत्रकारहरु थुनामा परिसकेका छन । यद्यपी अहिले त उनीहरु थुनामुक्त भईसकेका छन । यो कसको कारणले भन्दा पत्रकारहरु कै कारणले हो । त्यसैले म के भन्छु भने म यो काम गर्न सक्दिन, म लेख्न सक्दिन भने पत्रकारको विल्ला कार्ड भिरिरहन जरुरी छैन । नेपालमा अरु पनि थुप्रै पेशा र कामहरु छन । सक्ने भएमात्र पत्रकारिता पेशा गरौं हैन भने अरु नै पेशामा गए हुन्छ ।
तपाईले त्यस्तो कुनै चुनौती भोग्नु परेको त छैन नि ?
सामाजिक परिवेशलाई हेर्ने हो भने सानातिना चुनौतीहरु त आई नै रहन्छन, त्यो स्वाभिक पनि हो । यो मधेश हो पछिल्लो समयमा मधेशी पहाडिको फिलिङ्ग पनि आइरहेको छ । अव एउटालाई लेख्दा अर्कोलाई चित्त दुख्ने, अर्कोलाई लेख्दा अर्कोलाई चित्त दुख्ने । समाजमा विग्रह ल्गाउन चाहनेहरुले नै एउटा एउटा कुरा उठाएर समस्या त ल्याइरहेकै छन । त्यसलाई चिर्नका हामी स्वतन्त्र भएर, सन्तुलित भएर काम गर्दा जटिल समस्याहरु आउदैन जस्तो लाग्छ । सामान्य चुनौती त खेप्नुपरिहाल्छ नेपाली पत्रकारले ।
मुलधारको पत्रकारिता र नागरिक पत्रकारिताविच केहि फरक पाउनु भएको छ तपाईले ?
हामीले सवैले पत्रकारिता गरिरहेको नागरिक कै लागि हो । हामीले गर्ने भनेको नै नागरीकलाई सुचना दिने, सामाजिक विकास र उन्नतीका कुरा गर्ने, समृद्ध समाजको निर्माणका लागि भए–गरेका गतिविधिलाई प्रकाशमा ल्याउने, त्यही अभियान हो हामी पत्रकारहरुको । तर भनिन्छ नि अभावले स्वभाव विगार्छ भनेर, त्यस्तै धेरैको स्वभाव विग्रेपछि त्यसको परिणाम स्वरुप देशमा विकृति आउने त स्वाभिक नै हो । मलाई चाहीं के लाग्छ भने नागरिक पत्रकारिता र मुलधारको पत्रकारितामा प्रकृया फरक भएपनि सारमा खासै फरक चाहीँ छैन । जताबाट पनि, जसरी पनि समाजलाई सचेत गराउने नै त हो नि ।
अब अन्त्यमा, तपाईले मेरो रिर्पोटमा निरन्तर ब्लग लेखिरहनुभएको छ, तपाईलाई किन मेरो रिपोर्टमा योगदान गर्न मन लाग्छ ?
एउटा त प्रविधि प्रतिको मेरो चासो हो । त्यसका साथसाथै मैले गरिरहेको पत्रकारिताबाट कतिपय जानकारीहरु पुरारुपमा समाजमा नगईरहेको पनि हुनसक्छ, कति बाहिर रहनुभएको होला कति विदेशमा हुनुहुन्छ होला कतिले मैले गरेको रिर्पोटिङ्ग सुन्न वा हेर्न नभ्याउनु भएको होला त्यस्ता मान्छेहरुलाई घरमै बसेर इन्टनेट, ब्लग मार्फत त्यस्ता सामाचारहरु, सन्देशहरु बाँड्न पाईरहेको छु । यसले गर्दा मेरो पत्रकारिताको दायरा पनि अलि फराकिलो बन्यो कि जस्तो लाग्छ । त्यसैले मैले मेरोरिपोर्टमा निरन्तर लेखिरहन्छु ।
मेरोरिपोर्टमा फणि महतको प्रोफाइल पेजः http://meroreport.net/profile/phanimahat
Comment by Shuphal Kafle on June 25, 2011 at 1:17pm
Boss congratulation Haiiiiiiiiiii
Comment by Bhumika Ghimire on June 24, 2011 at 3:11pm
congratulation mahat ji. ii haved postedashorter english version of your profile at Nepal Bogs
Comment by Binaya Shekhar on June 23, 2011 at 6:05pm
Congratulations,. Looking forward to read more from you in future! great done.
Comment by RAMKUMARELAN.COM on June 23, 2011 at 2:03pm
Badhai ho Fani Comred....wel done from Terai Belt yaar....
Comment by Mukunda Nepal on June 23, 2011 at 9:47am
बधाइ छ फणिजी ।
Comment by Santosh Devkota on June 23, 2011 at 9:44am
फणि जी धेरै धेरै बधाई ।
Comment by एसवी गौतम on June 23, 2011 at 7:29am
Congratulation Phani Mahat Ji ! Your News very Delicious . going on ahead ! all is well !
Comment by Rupen on June 22, 2011 at 5:13pm
Congratulation Phani Mahat Ji! Hope to see more interesting contents from your side.